Haydarpasa မှာ 400 ။ တနင်္ဂနွေအရေးယူ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Haydarpasa မှာ 400 ။ တနင်္ဂနွေလှုပ်ရှားမှု
ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂနှင့်စက်တင်ဘာလ 400 15 Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အတွက်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်များကစတင်စျေးကွက်လုပ်ဆောင်ချက်xnumx.'cüနင်္ဂနွေနေ့ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS), action ကိုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်, ကျင်းပxnumx.'cüကလည်း, 400 ထံမှ AKP အာဏာရ Haydarpasa ရထားဘူတာနှင့်အများပြည်သူ mxnumx'lik နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးစင်တာအတွက်မြို့ပြနှင့်သမိုင်းဝင်က်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့သန်းဆိပ်ကမ်း 2004 ပတ်လည် နှင့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်များကစတင်စျေးကွက်လုပ်ဆောင်ချက် Haydarpasa xnumx.'cü 12စက်တင်ဘာလ 14 တနင်္ဂနွေရထားဘူတာရုံ၏ဝင်ပေါက်ရပ်တန့်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထဲကကျနော်တို့Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှမလိုချင်ကြဘူးဤအခြေအနေတွင်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
xnumx.hafat ဤအရပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုဖြင့်Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် xnumx.hafta အားလုံးထိခိုက်မခံတဲ့ကဏ္ဍများရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစက်မှုဇုံ rantsal လိုချင်သောပြောင်းလဲခြင်းခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးအဆုံးသတ်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခံရဖို့ကတည်းကရုန်းကန် 2005 နှစ်ပေါင်းအတူအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဘူတာရုံများနှင့်ဆိပ်ကမ်းဧရိယာအားပေးတော်မူပြီလုပ်အစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။
31 ဇန်နဝါရီလ 2012 ကတည်းကရထားများ၏ရပ်စဲပြောင်းလဲခံရဖို့ "Haydarpasa Garda Gara နေဖို့ပါလိမ့်မယ်" နာရီ 399 မှတနင်္ဂနွေ 13.00 အပေါ် 14.00 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သီးခြားမရှိတပ်မက်လိုချင်သောအသမိုင်းဝင်ဘူတာရုံအဆောက်အဦးလို့ပြောမယ့်စိတ်ကျရောဂါဧရိယာသို့လှည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ် voice ကိုပေး၏။
နိုင်ငံရေးပါတီများ, ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများ, စိုးရိမ်ပူပန်နိုင်ငံသားများအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဒီမိုကရက်တစ် Mass အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ခဲ့သည်နှင့် CHP လက်ထောက်လည်း 'အ hdp တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အမှတ် 1 ဌာနခွဲအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စု၏အစ္စတန်ဘူလ်Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အစိတ်အပိုင်းဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဥက္ကဋ္ဌ Hasan Bektas အဆင်သင့်တွေ့ဖြစ်ရပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပြပွဲ Haydarpasa istasyonundafilm ကျင်းပခဲ့သည်
အဆိုပါHaydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်လွှတ်ပေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားရာ၌မိန့်ခွန်းဟာရွတ်ဆိုMorgül Nejat Yavaşoğullarıနှင့် Senol နှင့်အတူဆက်လက်ပြီးနောက်အစီအစဉ်အရHaydarpaşa Garda စာနယ်ဇင်းဖြစ်ရပ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ 13.00 နာရီ စတင်. ။ အဆိုပါ Haydarpasa ရထားဘူတာရှေ့တွင်အတွက်ယာဉ်ရပ်နားအများကြီးအတွက်ညနေပိုင်းတွင်ရုပ်ရှင်ပြအတူပြီးစီးခဲ့သည်။
ဗိသုကာအစ္စတန်ဘူလ်ဌာနခွဲနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအနေဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Read Inspire Köymenဖြင့်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
"ပညတ်တရား၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်နေသောအဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ဥပဒေရေးရာအစီအစဉ်များ, အစီအစဉ်များနှင့်စီမံကိန်းများနှင့်အတူ, Haydarpaşaရထားဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာ၎င်း၏မရှိမဖြစ် function ကိုတိုအတွက်, ရထားနှင့်လှေကနေပြန်ပေးဆွဲလူများကိုတစ်ဦးတမင်အထီးထီးနေခြင်းမှပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြသည်။ ဒီကျနော်တို့စခန်းအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Anatolia က, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလင့်များအတွက်ရထားလမ်း, Seaways နှင့်အတူမူလတန်းအသုံးပြုမှုသောငါတို့အမှတ်တရများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝအာကာသ Haydarpasa ရထားဘူတာ, ဆိပ်ကမ်းနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်, Sirkeci ၏ပထမဦးဆုံးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ဒဏ္ဍာရီ silhouette မြင်ဘူးသောမဏိကျွန်တော်တို့အများစု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်, ပင်လယ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ခွဲထုတ်ခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြနှင့်လူမှုရေးမှတ်ဉာဏ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖျက်သိမ်းရေး။
ထိုအကြောင်းကြောင့်အတွက်စမ်းသပ်မှုအာဏာရမရှိတော့သူတို့ရှိသည်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ IMF နှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အမိန့်နှင့်အညီ "World Trade Center ကိုနှင့် Cruise နဲ့ဆိပ်ကမ်း" အမည်ဖြင့်7ထွန်အောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်သည့် planlar- စီမံကိန်းများကိုအဓိပ်ပါယျမရှိသောအိုလံပစ်ပွဲတော်၏ငာအောက်မှာစီမံကိန်းများကိုသူကကြေငြာအတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီHaydarpaşaဆင်ခြေဖုံးအနာဂတ်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာအသိအမြင်ကိုအသုံးပြုပြီးရပ်ရွာမှနှစ်လိုဖွယ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ညျထငျရှားgökdelenl ယဉ်ကျေးမှုစင်တာများ, ပြတိုက်တရားဝင်မှု ရှိ. ထိုကဲ့သို့သုံးစွဲမှုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ "
"ကခြိမ်းခြောက်မှုများ Haydarpasa ရထားဘူတာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ဆန့်ကျင်သည်ယနေ့ direnenil သောမြို့တော်-oriented စီမံကိန်းများအဖြစ်လူသိများသည် 2003 နှစ်ပေါင်းသည် ဖြစ်. , Uskudar ခရိုင်နယ်နိမိတ်၏ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူ 2012 အစီအစဉ်အတွက်၎င်း၏ပြင်ဆင်ထား, Haydarpaşaရထားဘူတာများနှင့်ကြီးမားသောခရီးသွားနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညတ်တရား၏စီးပွားဖြစ်ဧရိယာသို့အသွင်ပြောင်းခံရဖို့အနီးရှိ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သိသိသာသာအကျိုးအမြတ်ရယူပြီးလျှင်၏သင်္ကေတတန်ဖိုးကိုအဘို့, တားဆီး။ သို့သော်ထိုသို့ Haydarpasa ရထားဘူတာနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်, တန်ဖိုးများနှင့်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းရန်အဆင်ပြေလမ်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်အောက်မှဖြစ်လိမ့်မည်သေးသေးတမင်ထုံးစံပါပဲ။
ယနေ့ထိုအအဆောက်အဦဖြိုဖျက်ခံရ၏ဘုတ်အဖွဲ့အားဖြင့်၎င်း, အလွန်အရေးကြီးသောဒေသများရှိထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ယာယီဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေများနှင့်ခွဲဝေဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဧရိယာ၏အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမာဓိရှိပြိုကွဲနေကြသည်။ ယင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းန်ကြီးဌာန, 65 တထောင်တစ်ဦးစုစုပေါင်းဧရိယာ၌ 370 စတုရန်းမီတာအသုံးပြုပုံအစီအစဉ်ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာနှင့်အတူ Sogutlucesme ရထားဘူတာရုံ၏တဦးတည်းအတွင်းအစိမ်းရောင်အာကာသအထူးကြပ်မတ်တည်ဆောက်ပုံများမှယူဆောင်ခဲ့သည်နှင့်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုအသုံးပြုသူများ၏အကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်. ရထားလမ်းဘူတာရုံဆောကျမှုအဆိုပြုချက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Haydarpasa ဘူတာရုံအဆောက်အဦးကိုရှာဖွေနေနှင့်ပြန်သွားရန် Yard ကိုသုံးပါ ထိုသို့ disable ။ "
ကို 'အခြေခံမူ' '၏ "တရားမဝင်, မမှန်ခြင်းနှင့်ရူးယနေ့အခြေအနေများ, တမြို့လုံးကျနော်တို့မျှော်လင့်ချက်အတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အများပိုင်နှင့်လုပ်အားတန်ဖိုးကိုကာကွယ်များ၏အခက်အခဲနှင့်အတူလူမှုရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏တန်ခိုးအတွက်ဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့အာဏာရှင်စနစ်နှင့် rantl ဖို့လမ်းသို့ interwoven ဖြစ်ကြောင်းအများပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်-လေလံတင်ရောင်းချမှုကိုအသိအမှတ်မပြု။ သို့သော်ကျနော်တို့လူမှုရေး sensitivity ကိုနှင့်အသိအမြင်ကိုထမ်းယုံကြည်ခြင်းလူမှုရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုအပေါငျးတို့သစိန်ခေါ်မှုများရိုက်နှက်ပါလိမ့်မယ်။
မြို့ပြနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်, လုယက်ဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲ၏xnumx.yıl, စည်းလုံးညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏အကြီးအခိုင်မာခြင်းနှင့်အပျနှံနှင့်အတူဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုတနင်္ဂနွေပြောင်းကုန်ပြီ, 14 အဖြစ် Society က။ အဆိုပါ, ရှေးဟောင်းသုတေသန, ယဉ်ကျေးမှု, သမိုင်း, ကြှနျုပျတို့သူတို့ရဲ့အများပြည်သူအသုံးပြုခြင်းနှင့်တန်ဖိုးကာကွယ်ရေးမှကျူးလွန်ခြင်း, ကျွန်ုပ်တို့ဤပြဿနာအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုတစ်ဖန်ကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အနီးတဝိုက် Haydarpasa အပတ်က။ "
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အရေးအပါဆုံးဝိသေသလက္ခဏာ element တွေကိုကျနော်တို့ကထိန်းသိမ်းနေစဉ်သယ်ဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးအမွေလယ်ကွင်းများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်မှအာရုံစူးစိုက်မှုအထဲ၌တည်ဖို့နီးကပ် Haydarpasa ရထားဘူတာ၏ "တစျခု။ ဒီအမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်, ငါတို့မြူနီစီပယ်နှင့် TCDD အပါအဝင်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်, အထိခိုက်မခံအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့အထိခိုက်မခံနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်Kadıköy, ငါတို့အစ္စတန်ဘူလ်အဖြစ်ဂိမ်းထံသို့လာပေါ် uskudarli '' လု ယူ. နှင့် rantiye '' တံခါးပေါက်ကျနော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်ကောက်ခံနှင့်အာဏာပိုင်များမဟုတ် ပြု. , ကျနော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး၏အဓိကတာဝန်ဖြည့်ဆည်းရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ကြောင်းတစ်ချိန်ကနောက်တဖန်မိန့်တော်မူ၏နေကြတယ်။ "
အဘယ်အရာကို 400 တထောင်ဧည့်သည်နှင်းလျှောစီး Davraz ''